सांसद गगन थापाको बाख्रा फर्ममा रंगशालाको शिलान्यास ! - Sidha News
सांसद गगन थापाको बाख्रा फर्ममा रंगशालाको शिलान्यास !
नुवाकोट। सरकारी ढुकटीबाट रकम लगेर नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद गगन थापाले बाख्रा पालन गरेको ठाउँमा अहिले रंगशाला निर्माण हुने भएको छ।
सांसद थापाले बाख्रापालन गरिरहरेको भनेर सरकारी कागजातमा उल्लेख भएको नुवाकोट जिल्लाको सुनाखानीमा रंगशाला निर्माण हुने भएको छ । प्रदेश ३ सरकारले प्रदेशस्तरीय रंगशाला निर्माण गर्नेगरी प्रकृया अगाडी बढाएको छ । सांसद थापाले बाख्रापालन गरेको स्थानसँगै रंगशालाको निर्माणका लागि हिजो शनिबार शिलान्यास भएको छ।
प्रदेश नम्बर ३ का सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल,उपसभामुख राधिका तामाङ र प्रदेश सांसद बद्री मैनालीले उक्त रंगशालाको संयुक्त शिलान्यास गरेका थिए । नुवाकोट जिल्लाको सुनाखानीमा सांसद थापाले बाख्रा पालन गर्दै आएको सरकारी कागजातमा उल्लेख छ । सांसद थापाले बाख्रापालनका निम्ति मोटो रकम सरकारी अनुदानबापत लिएका थिए । तर उक्त स्थानमा बाख्रापालन नभएको पाईन्छ । बाख्रापालन गर्ने स्थान तल अहिले रंगशाला निर्माण शुरु भएको छ।
रंगशाला निर्माणको शिलान्यास गर्ने क्रममा पुगेका प्रदेशमन्त्री तथा सांसदहरुले सांसद थापाले गरेको भनिएको बाख्रापालन स्थानबारे पनि चासो राख्दै स्थलगत भ्रमण गरेका थिए । सांसद थापाले गरेको बाख्रापालन फर्मबारे यसअघि नै विभिन्न समाचारहरु बाहिर आएका छन्।